Mpanao Haiady Mifangaro (MMA), Mampiasa Ny Folo Segondra Nandreseny an’ilay Mpampianatra Tai Chi Mba Hihantsiana Ireo Shinoa Mpanao Kung Fu Mpitàna Birao · Global Voices teny Malagasy
Mpanao Haiady Mifangaro (MMA), Mampiasa Ny Folo Segondra Nandreseny an'ilay Mpampianatra Tai Chi Mba Hihantsiana Ireo Shinoa Mpanao Kung Fu Mpitàna Birao
Voadika ny 13 Mey 2017 5:58 GMT
MMA VS Tai Chi. Pikantsary
Tao anatin'ny folo segondra teo ho eo, Sinoa Mpanao Haiady Mifangaro (MMA), Xu Xiaodong, no nandresy ilay andrarezin'ny Tai Chi, Wei Lei, nandritra ny ady tany Chengdu tamin'ny 27 Aprily 2017. Nitranga taorian'ny fifandirana tao amin'ny aterineto teo amin'izy roalahy momba ny fampandrosoana ny Kung Fu Shinoa ilay ady — notsikerain'i Xu ny haiady Shinoa nentim-paharazana noho ilay izy sady miteny no manatanteraka, manary ny fampiharana ilay fahaizamanaony noho ireo mpitàna birao izay mitantana ireo fikambananà haiady ho toy ny orinasa.
Niteraka tabataba tamin'ny aterineto naharitra herinandro mahery ireo tsikerany momba ny “fifaninanana sandoka” sy ilay fihantsiany ampahibemaso ireo solotenan'ny mpanao haiady nentim-paharazana.
Nalefa tamin'ny alalan'ny haino aman-jery sosialy ary vetivety dia niparitaka tamin'ny aterineto ilay adin'i Xu sy Wei. Ity ambany ity misy dika iray avy amin'ny YouTube:
Taorian'ny ady, niezaka nanavotra ny lazany ireo manodidina ny Tai Chi tamin'ny filazàna fa i Wei Lei dia tsy tena mpampianatra lehibe, nefa ny hafa kosa nanamarika fa tsy ara-drariny eo anatrehan'ny haiady Shinoa nentim-paharazana ireo fitsipiky ny ady.
Namaly tao amin'ny WeChat i Xu fa mbola hanohy hihantsy ireo mpitarika ny solotenan'ny haiady Shinoa izy, mba hampibaribary ilay tranganà “Kung Fu sandoka” eo anatin'ilay sehatra:
Izaho, Xu Xiaodong, dia te-hampibaribary ny haiady Sinoa sandoka sy ireo tigra lehibe. 39 taona aho amin'izao fotoana izao. Hiady amin'ny solontena tanora sy solontena antitra aho. Mety hanao fihodinana roa na telo aho ao anatin'ny alina iray. Aza andosirana ilay ady azafady, amin'ny maha-solontenan'ny endrika fototry ny Kung Fu, ho sahy tsy hiditra amin'ny ady ve ianareo?
Tamin'ny 7 May, notapahana ny kaonty Weibo sy WeChat an'i Xu.
Niteraka hatezeran'ny vahoaka ny olan'ny fampisehoana “Kung Fu sandoka” tato anatin'ny taona vitsy. Ny ohatra tena nalaza dia ny vokatra tsara azon'ilay andrarezin'ny Tai Chi, Yan Fang, tamin'ny “Chi” ny Septambra 2012. Nabaribarin'ny mpanao gazety iray teo an-toerana ilay fandresena sandoka tamin'ny nandavoany bandy vaventy efatra tamin'ny alalan'ny Chi ary niparitaka be ilay lahatsary. Yan no Filoha Lefitry fahadimin'ny fikambanan'ny Haiady Hebei.
Noho izany, Sinoa mpisera maro no nanohana an'i Xu ary faly nahita ady imasom-bahoaka mismisy kokoa. Fa nampirisika ny mpianany mba tsy hamaly ny fihantsian'i Xu i Chen Zhenglei, mpampianatra lehibe ny Tai Chi.
Ity ambany ity ny taratasin'i Chen, izay niparitaka tamin'ny alalan'ny haino aman-jery sosialy Sinoa:
Tratry ny fetibe [01 May, Fetin'ny Asa] ry mpianatra malala isany! Tafaverina halina avy tamin'ny fitetezam-paritra nataonay tany Eoropa izaho sy ny reninareo ary nijery ilay vaovao niparitaka momba ny adin'i Xu Xiaodong tamin'[ilay] mpampianatra Kung Fu! Ny zavatra hitako dia misy olona manana saina ratsy mila ady amin'ny alalan'ny sehatry ny haiady Shinoa. Hanimba ny firaisankina misy ao anatin'ny sehatry ny haiady izany. Miantso ny Federasiona Iraisampirenen'ny Haiady sy ny Fikambanan'ny Shinoa Mpanao Haiady aho mba hampitsahatra izany. Raha manana ny fahaizana i Xu, avelao izy handray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ary hiady ho an'ny voninahitry ny firenena. Izay no sosokevitro ho an'ireo mpitarika ny Fikambanan'ny Mpanao Haiady. Efa nanome ny valinteniny izy ireo ary rahampitso no handinika ilay olana. Efa nampirisika ny mpianatra Tai Chi ao amin'i Chen koa izy ireo mba tsy hamaly ilay fihantsiana raha tsy izany dia hilatsaka ao anatin'ny fandrika napetrany isika. Raha mbola manohy manempotra ny hafa ihany ilay bandy adala, afaka mandray fepetra araka ny lalàna isika. Henoy, manasa anareo aho mba hitandrina amin'ny fihetsikareo. Mampirisika anareo koa aho mba hanohy ny fampiharana, mba hahafahantsika miady amin'ny fo tony ny ady Tai Chi an'i Chen, ary ho an'ny firenena rehefa miatrika zava-tsarotra isika amin'ny ho avy.
Nahita ny kabary tsara lahatra maneho fitiavan-tanindrazana nataon'ny mpampianatra Tai Chi ho toy ny taratry ny fitondrantena fitadiavana tombontsoan'ny mpanao haiady Shinoa ilay mpitoraka bilaogy Cheng Wangdong:
Samy mahalala ny rehetra fa notanterahintsika ny nofin'ny fifohazam-pirenena nandritra ireny taona maro ireny ary miseho ho toy ny fahitsiana tanteraka ny teny filamatra. Lasa tsy azo sarahina amin'ilay nofy ny sehatry ny haiady Shinoa. Mifamatotra ny voninahitra sy ny henatra. Lasa tranga niraisana [an'ny daholobe] ireo fifandirana manokana[…] Raha misy olana mitranga ao amin'ny sehatry ny haiady, tsy mamaha ilay olana amin'ny fitsipiny samy irery ny sehatra, fa mandohalika mitady fiarovana eo anatrehan'ny manampahefana. Te-hilaza aho hoe tsy ao anatin'ny sehatry ny haiady intsony i Chen Zhenglei.
Araka izay efa nampoizina, tamin'ny 3 May, namoaka fanambarana niampanga an'i Xu ho “mpila ady” ny Fikambananan'ny Shinoa Mpanao Haiady, ary nanambara fa tsy ara-dalàna sy manohitra ny soatoavin'ny Kung Fu ilay fihestiny.
Mazava àry, fa ltsaka lavitra any ambadiky ny fivoarana sy ny fametrahana ny sehatry ny haiady ho toy ny resaka fitantanana no fahitan'ny daholobe ny haiady. Nanao tatitra momba ny fanadihadiana mikasika Haiady Sinoa ny orinasa fanaovan-gazety ao an-toerana Beijing News ary nahatsapa fa ireo tena mpikirakira ny haiady nentim-paharazana, anisan'izany Shaolin, Wudang, Qingcheng, Emei ary Kongdong dia nivoatra ho lsa vondron'orinasa izay nanokatra sekoly fianarana haiady, mamokatra sarimihetsika, mivarotra fanafody Shinoa, mampandroso ireo toerana fizahantany sy ny maro hafa.
Tamin'ny alàlan'ny fandraràna ireo mpikambana ao aminy tsy hamaly ilay fihantsiana, nanavotra ny endrik'ireo solontena fanta-bahoaka amin'ireo sakelika haiady goavana ilay fanambaràn'ny Fikambanana Shinoa Mpanao Haiady.
Na izany aza, dodona hiady amin'i Xu amin'ny fampiasana ireo fitsipika napetrany manokana ireo any ivelan'ny fikambanana haiady Shinoa. Ohatra, Hu Qiong, mpampianatra Xiaolin Chi, dia nihantsy an'i Xu Xiaodong hampiasa ilay fitaovam-pandavahana.
Fampisehoan'i Hu Qiong ny fanamby ampiasàna fitovana fandavahana. Sary miely be avy ao amin'ny Weibo, tao amin'ny Stand News.
Raha tena mpiady tsara i Xu Xiaodong, avelao aho hitazona ny fitaovam-pandavahana ary handavaka ny fihirifany, ny tendany sy ny sisa. Raha tsy maratra izy, hoekeko ny Kung Fu-ny sy ny teniny momba ny tranganà haiady Shinoa sandoka.